Isitolo esidayisa yonke impahla Value-added service Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki | Ngesikhathi
Izinsizakalo ezenezelwe Value Sebenzisa amasevisi wethu anezelwe inani ukwakha umkhiqizo wakho! Ukuphakanyiswa komkhiqizo 1. Sicela ungeze okufaka ukumaketha futhi ugcine amakhasimende akho. 2. Phinda ubeke umkhiqizo kumaphakheji ahlelwe ngokwezifiso ...
Sebenzisa izinsizakalo zethu ezengezwe ngenani ukwakha umkhiqizo wakho!
1. Sicela ungeze ukufakwa kokumaketha futhi ugcine amakhasimende akho.
2. Phinda ubeke umkhiqizo ebhokisini elenziwe ngendlela oyifisayo ngesitayela sakho osithandayo.
3. Ukufaka nokuhlanganisa kungathuthukisa ukuthengwa kwakho futhi kube lula inqubo yokusabalalisa.
4. Ukulebula kuyinqubo enzima kodwa ebalulekile, ngakho-ke sizokuthathela yona bese sibeka amalebuli ngokufanele ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yakho iyabonakala.
Isevisi Yokuthengwa Kwezimpahla
Kule makethe eshintsha ngokushesha, imijikelezo yempilo yomkhiqizo iyancipha futhi ibe mfushane, amakhasimende angakhetha izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo, isikhathi sokumaketha sibaluleke kakhulu, esizocacisa impumelelo yenkampani.
I-GZ Ontime Supply Chain Services (SCS) ihlinzeka ngezinsizakalo zokuhlinzekwa kokuphela kokuphela kwe-OEM (Original Equipment Manufacturer), i-ODM (Original Design Manufacturer), i-EMS (Electronic Manufacturing Service Provider) nabakhiqizi bezinto ezisebenza ngogesi ukuze bakwazi ukwenza ngcono ukutholakala kwayo uchungechunge.
Njengomsabalalisi womhlaba wonke, amakhadi ethu olayini abanzi ahlinzeka amakhasimende ngesipiliyoni se-"one-stop" sezidingo zokuklama nokunikezela. Ubungoti namathuluzi asetshenziswa ithimba lethu lokuthengwa kwempahla kukuvumela ukuthi wehlise izindleko eziphelele zokuthengwa kwempahla, wandise imali oyisebenzelayo, futhi ujabulele ukuguquguquka kokutholakala kwempahla ukukhulisa isabelo sakho semakethe nenzuzo yakho.
Izinsizakalo ze-ejensi yokukhokha nokuthenga
Insizakalo ye-ejensi yokukhokha yezohwebo
Singakunika insizakalo yokukhokha yasefektri yamahhala.
1688.com/taobao.com/jd.com insizakalo yomenzeli wokuthenga
Sithinta umthengisi futhi sixoxisane ngokuthengisa egameni lakho
ITaobao namanye amawebhusayithi amaShayina awayemukeli i-PayPal! Sikuvumela ukuthi uthumele inkokhelo nge-PayPal, bese sizosebenzisa umhlinzeki wokukhokha waseChina ukukhokha umphakeli! Ukunikeza ukuvikeleka okukhulu lapho uthenga kumphakeli waseChina!
Sisebenzisa iminyaka yethu eminingi yokuthenga eTaobao, sizokunikeza izeluleko ngokusebenza komthengisi nezinye izeluleko zeTaobao ...
Singakunika ukuthengwa komkhiqizo, i-ejensi, ukuhlolwa, ukuthuthwa komhlaba wonke, uma udinga, singakunika ezinye izinsizakalo.
Langaphambilini Ummeli Wokwehla